Mashruuca Kala Bixinta Harada Tappan, Daraasadda Kiiska Soocelinta Harada
Biyo-la’aanta Tappan Lake waxay ka bilaabmaysaa Ellicott Brand® 370 Dragon Dredge
HARRISON COUNTY, OH (USA) - Qulqulka qaybo ka mid ah harada Tappan Lake ayaa ugu dambeyntii ku bilaabmay qalab si dhab ah u jira iyo biyaha, sida ay sheegtay Barbara Bennett, agaasimaha adeegyada maamulka Muskingum Watershed Conservancy District (MWCD).
Arinta ayaa laga wada hadlay kulanki billaha ahaa ee jimcihii la soo dhaafay, kaas oo lagu qabtay Mansfield Charles Mill Lake Park.
Bennett wuxuu cadeeyay in 400,000 dhudhun oo dhudhun ah oo faquuq ah laga saari doono sagxadda Tappan, oo ka dhici doonta meel u dhow Beaverdam Run Bay, Clear Fork Bay iyo labada dhinac ee Wadada Deersville.
Qulqulka waa in lagu dhex qodaa tuubbo dabacsan, oo ka gudbi doona US 250 isla markaana leh goob MWCD leedahay, oo ku taal geeska waqooyi-galbeed ee Addy Road iyo US 250, sida uu sheegayo Bennett.
Mashiinka weyn ee buluuga ah iyo kan cad ee leh xarkaha oranji waxaa loogu magac daray "CADIZ", ayay tiri waxayna intaas ku dartay in looxyada deyrarka iyo sagxadaha la dejiyay guriga Addy.
“Nidaamka tuubada biyaha waa qaab farsamo ahaan iyo xaalad farshaxanada farshaxanka,” Bennett ayaa ku sheegay emayl ahaan. Waxay sheegtay in isticmaalka matoorku uu yareyn doono taraafikada gawaarida, taas oo sida caadiga ah loo isticmaali doono in lagu hawo wasakhda. Nidaamka wasakhda, oo lagaga wada hadlay shirarkii hore ee MWCD, waa nidaam, kaas oo si dhakhso leh u qallajiya aaladda, taas oo u oggolaanaysa qaatayaasha agabkan inay si dhakhso leh u isticmaalaan.
Waxaan wadahadal joogta ah la yeelan doonnaa Harrison County iyo sidoo kale… ODNR (Waaxda Kheyraadka Dabiiciga ee Ohio), ayuu yiri Bennett. "Waxba [lama soo afjarin] laakiin waxaan haysan doonnaa wax ka badan xNUMX yaardi oo walxaha ah markaa waxa jira waxyaabo fiican oo la heli karo oo lagu buuxiyo ama lagu isticmaalo meel."
Wakiilka Gobolka Harrison, Don Betel, wuxuu sheegay isla inay wali ka wada hadlayaan arinta MWCD iyo inay wali aad u daneynayaan inay helaan qaar ka mid ah fajacintaas oo laga soo saaray harada.
Beytel wuxuu hore u sheegay horaantii sanadka in hal fikir oo ku saabsan sidii looheli lahaa looguna adeegsan lahaa buuxinta dooxada badan ee yar yar ee u dhaw Wadada Warshadaha. Fikradda ayaa ah in la ballaariyo dhul dheeri ah si aaggu uu xitaa ugu sii xiisoodo ganacsiyada mustaqbalka, kuwaas oo durba bilaabay inay ka soo baxaan halkaas.
Ku Bilaab Mashruucaaga Bilaashka Ah ee Ellicott
La xiriir Sales
Qaybaha Daraasaadka Wararka & Kiiska
Noocyada Kala Duwan ee Kala Goynta